Waa Maxay Cilmiga Sayniska? | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Leylo Maxamuud — March 30, 2017
Cilmiga Kimisterigu, (Chemistry) waa barashada laga maar-maanka ah ee cilmiga sayniska maatarka , iyo isku dhisyada iyo sidoo kale hababka ay u falgalaan. Haddaba ugu horeyn waa maxay matter? Maatar waa: “wax kasta oo cuf iyo miisaan leh oo meel bannaan buuxin kara”. Intaas kadib cilmiga kiimikadu wuxuu door laxaad leh ka qaataa barashada qaababka iyo noocyada kala geddisan ee maatarka (matter). Isku dhisyada kiimikooyinka.
Maatarku waxaa loo qeybiyaa saddex marxaladood oo kala ah. adke (Solid), Dareere (Liquid) , iyo Neef , (Gas).
Markaas guud ahaan cilmiga kimistarigu waa barashada walxaha maatarka iyo is-bed beddelkooda , iyo sidoo kale hannaanka kiimikada noolaha, iyo kan wax-soo-saarka wershadaha (Industrial chemistry).
Waxyaabaha kiimikooyinka ah ee loo isticmaalo nolosha waaqiciga ah waxaa ka mid ah agabka rinjiga (paints), iyo agabka warshadaha , iyo weliba dhammaan dawooyinka oo idil. Run ahaantii cilmiga kiimikadu waa aqoon ilaa xad salkeedu ballaadhan yahay oo aynnaan awoodin in dhowr saddar iyo wax la mid aynnu kaga boganno, balse, waxaa muhiim in cilmiga kiimikada aad wax ka ogaatid haba yaraatee.
Waxa jiraa curiyaal ciiddaa iyo cammaarkaas ka badan oo ooggada dusheeda ku sugan, kuwaas oo loo sameeyay jadwal amma bandhig lagu kala sooco. Jadwalkan ayaa waxaa ku farra-yaraystay saynisyahankii ruushka ahaa ee loo yaqaannay Dmitri Mendeleev[] , sannadii 1869 kii , khabiirkan reer Moscow ayaa u habeeyay hadba sida ay isula jaan-qaadayaan wareega unugyadu iyo jaadka ay u falgalayaan. Middaas oo innoo suurtogelisay in garasho loo yeesho shaqada kiimikooyinka iyo sidoo kale waxyaabaha ay gaarka u koobsadeen curiyayaasha kiimikadu.
Intaas kadib Haddii aan ku horreyno curiyaha loo yaqaan kaarboonka (carbón) oo waxtar weyn u leh aadanaha oo idil , ayaa leh noocyo kala geddisan , balse, noocyada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah kuwa sida dabiiciga ah looga helo ooggada sare ee dhulka sida Saliidda , Dhuxusha ,iyo Nuuradda. Inkastoo kaarboonku la fal-galo curiyayaal tirro badan taasi waxay sababtay in uu noqdo curiyaha ugu isku-dhisyada badan dhammaan. Sidoo kale curiyaha kaarboonku waa curiyaha shan-tobnaad (15aad) ee ugu badan iyo sidoo kale ka afaraad (4aad) ee ugu cufka iyo miisaanka badan.
Curiyaha kaarboonku oo afka qalaad ee english-ta ku noqonaya ( CARBON) wuxuu leeyahay summad u gaar ah oo ah sidatan: (C) , curiyahan ayaa ah kiimiko , tirada atomkiisuna tahay (6). curiyahan ayaa ka mid ah curiyaasha ugu caansan diiwaanka curiyeyaasha. kaas oo ilaa xilli hore dadku yaqaaneen.
Sida dabiiciga ah , curiyahan waxa laga helaa ooggada sare ee dhulka asagoo koobsaday saddex (isotope) , oo looga jeedo curiyaha oo yeelanaya noocyo kala duwan , noocyadaas oo iskaga mid noqonaya tirooyinka toggan ah balse ku kala duwan tirooyinka tabban. (each of two or more forms of the same element that contain equal numbers of protons but have different numbers of neutrons in thier nuclei).
Mar hadii macnaha isotope aynnu isla qaadannay , aan horre uga sii socda , curiyaha kaarboonka ayaa leh saddex isotope oo kala ah |C|12 , |C|13 , |C|14 . dhammaantood qaab dhismoodkooda yahay mid miisaaman , inkastoo C14 yahay mid siidaaya shucaac (Radioactive).
Curiyaha adduunka ugu badan ee Kaaroboonka ayaa wuxuu noqday mid wax-seeg iyo wax-tar ba koobsaday. Curiyahan ayaa door muhhim ah ka ciyaaray nolosha bini’aadamka. Curiyahan ayaa ku jira Lafta noolaha , sido kale wuxuu ku jiraa hawada, carrada , iyo waxyaabo badan oo innagu gedaaman.
Carboon 14 oo ka mid noocyada kaarboonka ayaa ah curiye aan deggeneyn , oo bixiya shucaac (radio active), waxaana soo sahamiyey carbon 14 saynisyahankii Reer Maraykan ee la odhan jiray; Willard Libby[] iyo asxaabtiisi ay kamid ka ahaayeen Martin Kamen iyo Sam Ruben, iyagoo ku sugan jaamacadda california (University of california Radiation Laboratory), sannadii 1940 kii. Akhriste waxba ha ku dawakhin meerisyadan kala duwan balse aan kuu soo koobo , curiyaha kaarboon ayaa leh qeybo kala duwan oo aynnu kor ku xusnay laakiinse kan u dambeeya ee carbón 14 oo ah curiye aan degenayn oo siidaaya walxo shucaac noqda.
Sidaa daraaddeed, curiyaha aan deggenayni ma hakan karo keligii waa inuu siidaayaa iniinyaha xambaarsan danab leh shixnad eber ah (zero charge) oo ah neutrons .iyadoo loo marayo habka loo yaqaan (neutron loss) , oo uu u diraa iniinyo xambaarsan danab leh shixnad dhiman (negative charge) oo looga jeedo (electrons) ,curiye kale, ama uu soo amaanaystaa elektaroon kale (electron) si uu u kasbado nuyuutaroonno (neutrons) dhammaystiran. marka loo fiirsho elektroonnadiisa, ama waa inuu curiye kale kula xidhmmaa si uu ula waddaago elektaroonkiisa dheeraadka ah.
Sidoo kale akhriste waxaad ka warqabtaa amminta la joogo in dunidda korkeeda ay soo waajahayaan waxyeelooyin tirro badan , ha ugu horreyso cimilada adduunka ee kululaanaysa . ma ogtahay in isticmaalka tamarta oo aan si fiican loo maareyn ay sababtay is-beddelka cimilada adduunka. Kulaylka (global warming)[] ayaa ka yimid korodh ku dhaca heer-kulka deegaanka oo ay sababeen isticmaalka xad-dhaafka ah ee gaadiidka iyo sidoo kale wasakhda ka soo baxda warshadaha . waxyaabahaas ka soo burqanaya deegaanka ayaa qiiq ku sameeya hawada sarre (atmosphere) , suntaas waxaa ka mid ah , Carbon dioxide , Methanol , Nitrogen Oxide , iyo CFCs.
In badan ayaa la isweydiiyay maxaa xal u noqonaya is-beddelka cimilada adduunka ee ka sii daraysa? Waxaa la isku afgartay in la isticmaalo Nuclear Power , oo loo maleeyay in uu maaro u noqon karo xurguftan. Akhriste maxaad ka ogtahay Nuclear Power?. Aan dhowr saddar oo kooban la dul maro. Nuclear power waa tamarta ku jirta ilma-qabatida (Atom) , tamartaas oo ah dabbarka isku haya shixnadaha kala ah (Protons) iyo (Neutrons).
Tusaale ahaan macdanta Uranium-235 oo noqotay ammintan hubka ugu ballaadhan (Nuclear Weapons) ama (Weapons of Mass Distruction) (WMD) ee gummaadka loo adeegsado ayaa ku samaysanta hannaan ah in la kala fogeeyo curiyaha ilma-qabatida ah (Nuclear Fission or Thermonuclear Energy) , kaas oo ku dhacaya atamka curiyaha oo la kala firdhiyey iyadoo la isticmaalayo elektaroonno xawaare sare ku ordaya ; amma curiye awood la isugu keenayo atamkiisa (Nuclear Fusion) ; amma labba curiye oo la isku soo riixayo atamyadooda iyadoo awood electron oo kale la adeegsanayo.
Inkastoo curiyahan Uranium-235 uu dheef badan aadanaha u leeyahay marka laga yimaado dhibtiisa ayaa haddana waxa lagga dhalliyaa koronto aad u badan, iyadoo la isticmaalyo qalab u gaar ah. Sida sawirka hoose ka muqata ( Figure.1) waa qalab ka sameysan birr weyn , iyo tuubo biyo ku jiraan oo afka hore lagaga xidhay , kadibna lagu dhex shubay macdantii uuranium, dab holcaya ayaa lagu shidayaa macdantii , kolkaas kulka saa’idka ah ee ka soo baxaya macdanta uuraaniyamta marka la dhallaaliyo , ayaa dhaqaajiya tuubooyinka biyaha ee ku xidhan dhanka horre ee uuraaniyamta , iyo injiinada waaweyn ee ku rakiban tuubada biyaha, kadibna waxaa halkaas ka abuurma koronto xawaare sarre ku socota.Jaantus muujinaya habka macdanta Uranium looga dhalliyo koronto.
Gebo-gebadii , akhriste ma ogtahay in dhulka soomaalida ee dihinka ahi ay ka buuxaan kiimikooyin dabiici ah (Natural) , misana aan laga war-qabin . xeebaha soomaalida oo idil ayaa waxaa ku jiraa kheyraad tirro badan , oo illaa iyo haatan aan la wax-tarsan (laga faa’idaysan)
Tags: Waa Maxay Cilmiga Sayniska?
Next post Tallooyin Iyo Xikmado Ku Saabsan Nolosha
Previous post Buufiskii Xumaa Iyo Tiiraanyo Tahriib -Qeybtii 8aad